Ekpere La Santa Muerte maka Ego. ? Na -arụ ọrụ n'ime awa 24!
EKPERE EKPERE MAKA EGO EGO Ọ dị ike ma ọ bụ nke a kpatara ọtụtụ mmadụ ji aga n'ihu na-esonye n'usoro ndị kwere ekwe nakwa na e nwere ọtụtụ ọrụ ebube ndị Saint a nyere.
Commonrịọ maka ego bụ ihe a na-ahụkarị, ihe nwere ike ịmaghị ama bụ ekpere a maka arịrịọ a, n'agbanyeghị na enwere ike ịrịọ ya.
Onye obula nke nekpe oku kwesiri iji okwukwe si n’obi mee ya, n’agbanyeghi chi nke a na-ario arịrịọ ebe nke a bu ihe a choro.
1 Ọnwụ Nsọ ga - enyere m aka?
2 Ekpere Santa Muerte maka Ego
3 Gịnị ka ekpere a bụ maka ya?
4 Kedu mgbe m nwere ike ikpe ekpere Santa Muerte iji dọta ego?
Ọnwụ Nsọ ga - enyere m aka?
Saint a nwere ike inyere onye ọ bụla bịakwute ya nso site n’ikwere na ihe ọ na-arịọ ga-ekwe omume.
N’agbanyeghi etu o siri di ike ihu ihe a na-aju, ihe kacha mkpa bu imata na ihe a na-eme bu omume nke juputara n’okwukwe na nke si n’ime mmụọ n’ihi na ekpere bu ngwa agha di ike ma n’eji otua mee ihe. na ọgụgụ isi
Ekpere Santa Muerte maka Ego
Ọnwụ dị ebube, ezigbo nwa m nwanyị ọcha, ezigbo enyi m na onye otu m nọ n’ụzọ anyị tụkwasịrị obi n’oge niile nke ndụ anyị siri ike ma sie ike, onye anyị ga-enwekwa ọ joyụ nke ịhụ gị n’ụbọchị ikpeazụ nke ndụ anyị.
Gi onye mara ihe nzuzo nke uba, kwe ka wheel gharizie nke oma ebe ihe na - akpata isi gi.
Kwe ka m sonye n'ike gị ma kpọọ m ihe m chọrọ n'aka gị, ezigbo akụ na ụba, ụba na ụba.
Ebe ịchụàjà gị ga-agba akaebe nke m ga-enwe maka gị, onye nwere ihe omimi nzuzo na chi niile.
Wepu Nwanyị dị ike were ume gị wee mee ihe iyi egwu na ihe egwu na-adakwasị m, chụpụ nhụsianya ka ọkụ gị n’enweta, rute ndị chọrọ ya.
Nyem ezi oma, na udiri ahia na azumahia nke ihe abia na aka m, ogba-uba na ogba-ala na-achi ulo m.
A ga m eji onyinye nye gi ekele, I ghakwa ntụkwasị obi m rue mgbe ebighebi. Daalụ enyi na ntụkwasị obi na enyi m nwanyị ọcha, Ọnwụ m dị nsọ.
(Jiri okwukwe siri ike mee arịrịọ gị ebe a.)
Nke a bụ ekpere anyị nwere ike ịtụkwasị obi na nke anyị nwere ike iru ya ihe mgbaru ọsọ ego nke anyị setịpụrụ.
Ọ baghị uru nhịahụ ma ọ bụ nnukwu.
Ekpere a di ike ma nye aka ọnọdụ akụ na ụba niile nke ahụ nwere ike ime na ndụ.
Gịnị ka ekpere a bụ maka ya?
Ego bu ihe na echegbu anyi n’ihi na n’enweghi ya anyi enweghi ikike izu ahia nke di nkpa.
Nke a bụ una oración nke ahụ nwere ike inyere anyị aka nke ukwuu ma ọ bụrụ na anyị mere ụfọdụ ajọ azụmaahịa dị ka a ga - asị na anyị nọ na ogbo ebe anyị na - amaghị nke ọma ihe anyị ga - etinye ego.
Ego ga-alaghachikwute anyị ọsọ ọsọ na ọrụ ebube, ọ bụ ya mere ekwesịrị ikpe ekpere nke ọma.
Kedu mgbe m nwere ike ikpe ekpere Santa Muerte iji dọta ego?
Oge niile dị mma iji bulie ekpere na ekpere ndị ọzọ, ihe dị mkpa bụ ịmata ihe anyị na-eme.
Mara na ọ bụ omume nke okwukwe na anyị nwere ike nweta ọrụ ebube ahụ anyị na-arịọ maka ya, ebe anyị na-enweghị okwukwe ọ bụ ihe na-agaghị ekwe omume ịrịọ arịrịọ anyị inwe azịza, okwukwe bụ isi okwu nye ekpere niile.
Kpee Santa Muerte ekpere maka ego jiri nnukwu okwukwe.
Ekpere Santa Muerte maka ịhụnanya agaghị ekwe omume
Ekpere ike na Santa Muerte maka ọrụ
Ekpere maka Saint Cyprian siri ike